प्रचण्ड र बामदेबको बाक्लियो सम्बन्ध,ओली लाई साक्षी राखेर के खिचडी पकाऊदैछन? « हाम्रो ईकोनोमी
प्रचण्ड र बामदेबको बाक्लियो सम्बन्ध,ओली लाई साक्षी राखेर के खिचडी पकाऊदैछन?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेब गौतम र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको हिमचिम नयाँ विषय होईन ।उनीहरुबीच १२ बुँदे सम्झौता हुनु अघि भूमिगत कालदेखिकै सम्बन्ध हो । भूमिगत कालमा उनी बार्ताको लागि रोल्पासम्म पनि पुगेका थिए । त्यो सम्बन्ध उनीहरु अहिलेसम्म पनि कायमै छ ।
एमाले र माओवादीबीचको पार्टीगत सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा पनि प्रचण्ड र बामदेबको सम्बन्ध यथावत नै रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्दा समेत आफूले नेकपा एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको उल्लेख गर्दै समय आउँदा एमालेबाट अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था आउने बताएर बामदेबप्रति संकेत गरेका थिए ।
अहिले फेरि प्रचण्ड र बामदेबबीचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ । आजै पनि उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रचण्ड र एमालेका नेताहरुबीच दिनँहु जसो छलफल हुने गरेको छ ।
भेटवार्तामा एमालेले बामदेबलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै निर्वाचन अघिनै उनको नेतृत्वमा गठबन्धन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर प्रचण्ड तत्कालै गठबन्धन तोड्ने योजनामा नरहेको स्रोतहरुले बताएका छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यो विषयमा सोच्न सकिने भन्दै बामदेबलाई आश्वासन दिएका छन ।
केपी ओलीले समेत थाईलैण्डबाट फर्किएर आएपछि यस विषयमा प्रचण्डसँग कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।